Misoro yeNhau dzaNhasi, Chitatu, Gunyana 23, 2020
Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 hwakanga hwasvika pazviuru zvinomwe nemazana manomwe negumi nemumwe chete, kana kuti 7, 711 zvichitevera kubatwa kwevanhu vashanu nechirwere ichi nezuro wakare.
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, nhasi vabatana nevatungamiri vedzimwe nyika pakuvhura zviri pamutemo kwemusangano weUnited Nations General Assembly. VaMnangagwa vari kutariusirwa mangwana manheru kutaura pamusangano uyu vari kuZimbabwe sezvo vatungamiri vakawanda vari kunyika dzavo nekuda kwechirwere cheCovid-19
Mutungamiri weSouth Africa, VaCyril Ramaphosa, vanoudza musangano weUnited Nations General Assembly kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe, zvibviswe.
MDC Alliance yakwanisa nhasi kubvisa mari yechibatiso inoita zviuru makumi mashanu emadhora, kuitira kuti mutevedzeri wasachigaro webato iri, VaJob Sikhala, vatongwe vachibva kumba kwavo. VaSikhala vakapihwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nezuro.
Paramende, Transparency International Zimbabwe pamwe neZimbabwe Anti Corruption Commission zvonyererana chibvumirano chekurwisa huori.
Nyanzvi munyaya dzehutano pamwe nevemachechi vozeya danho rehurumende rekuwedzera huwandu hwevanhu vanobvumidzwa kuungana pamwe chete vachinamata munguva ino yeCovid-19.
Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro naVaLeonie Kuchakanya, avo vari kurima muriwo zvinonwisa mvura vari muPretoria, South Africa, uyo wanotengesera vanhu vanobva pedyo nekure nePretoria.
Muchirongwa cheLiveTalk na8pm tiri kutarisa zviri kuitika gore rino kumusangano weUnited Nations General Assembly.